Baaq & talooyin ka digaya sawirada & muuqaalada laga qaado dadka xiskoodu dhiman yahay. – Radio Daljir
Baaq & talooyin ka digaya sawirada & muuqaalada laga qaado dadka xiskoodu dhiman yahay.
Somaliya, Nov 16 – Aqoonyahanno waxgarad ah oo soo saaray baaq digniin iyo talooyin ah oo ku wajahan sawirada iyo muuqaalada laga qaado dadka xiskoodu dhiman yahay.
KU: Dhammaan wargeysyada kala duwan ee Soomaalida
KU: Dhammaan Mareegaha kala duwan ee Soomaalida
KU: Dhammaan TVda kala duwan ee Soomaalida
UJEEDDO: Talo Iyo Digiin
Sida aan ka wada warqabno bulshada soomaalida waxa ugu jilicsan dadka xiskoodu dhiman yahay. Qofka xiska dhiman weligiiba waxa haystay dhibaato caafimaaddarro, mid guri la’aaneed, mid ammaandarro iyo mid cunto la’aaneed intaba. Shinbiri maalin bay dab qaadday maalintiina buulkeedii bay gubtay, soomaalida intii ku baraarugtay inay dadkaa dhibkooda ka damqato qaar kood ayaa waxtarkoodii waxyeello culus oo aan ka soo waaqsi lahayn ku noqonayaa dadka xiskooda waayey. Waayo-aragnimo la’aanta iyo fiiro la’aantu mararka qaar kood bay halis ba’an iyo dunuub culus horseeddaa.
Qofka xiska ka dhiman masuuliyadi ma saarna, sidaa darteed ma aha qof ilaalin kara sharaftiisa iyo karaamadiisa qofnimo, ma aha qof diidi kara wixii muddarro ku ah sharaftiisa iyo wejigiisa midna. Haddaba walaalayaal ma gar baa in dadka xiskoodu dhiman yahay laga qaado sawirro iyo muuqaallo fillim ah oo si buuxda u soo bandhigaya shiqsiyadda qofka buka? Ma gar baa in qof xiskiisu dhiman yahay laga qaado wareysi oo codkiisa la soo bandhigo? WAA WEJIGAA GUBAY ARRINTU!!!!!!!!!
Bal qiyaas qof bogsaday oo ka dib lagu caayey hadal uu warbaahinta ka jeediyey xilligii uu bukay ama daawaday muuqaal laga duubay xilligii uu bukay! Hadduu dib u waasho ama qoorta ka soo jaro qofkii sawirkaa ama hadalkaa ka duubay masuuliyaddaa yaa leh?
Waxa qofka xiska fayow ku xun baa qofka dhimanna ku xun. Sawirada iyo codadka laga qaadayo dadka xiska dhimani waxa ay dhaawac iyo meel ka dhac xun ku tahay:
1. wejiga iyo karaamada qofku mudan yahay inuu bulshadiisa ku dhex yeesho.
2. waxa ay dhaawac iyo meel ka dhac xun ku tahay xuquuqdii qofku bulshadiisa ku lahaa ee ahayd in ceebtiisa iyo cawradiisaba la asturo.
3. waxa ay dhaawac iyo meel ka dhac xun ku tahay xuquuqdii qofka bukaa ku lahaa dhakhtarkiisa iyo bulshadiisa ee ahayd inaan sirta bukaankiisa loo bandhigin dadweynaha haddaanu isagu dalban.
4. waxa ay dhaawac iyo meel ka dhac xun ku tahay ehelka iyo qoyska uu ka dhashay qofka xiska dhimani.
Walaalayaal, ma waxa aan wax-qabad uga dhignaa walaalka xiska dhiman in muuqiisa iyo hadalkiisa laga maadsado?
Digiin Iyo Talo
1. Laga bilaabo maanta waxa aan ka digaynnaa in laga duubo dadka xiskoodu dhiman yahay wax maqal iyo muuqal ah oo muujinaya aqoonsiga shiqsiyadda qofka.
2. Haddii maanta laga bilaabo la arko cid ka duubtay dadka xiskoodu dhiman yahay muuqaal iyo maqal ama midkood waxa lagu soo oogi doonaa dacwad aan jixinjix lahayn.
3. Hay’adda ama warbaahinta sii wadda faafinta iyo baahinta sawirada, codadka iyo muuqaallada maanta ka hor la duubay waxa aanu iyana la beegsan doonnaa dacwad adag oo la xidhiidha arrintaa.
4. Marka la doonayo in la muujiyo dhibka dadkaas haysta waxa la duubi karaa muuqaal aan wejigu muuqan, codna lahayn(codka qofka buka oo badheedh loo duubay).
5. Waxa aanu si adag ugu talinaynaa in la tirtiro dhammaan wixii hore looga duubay dadka xiskoodu dhiman yahay ee muuqaal iyo maqal ba leh isla markaana muujinaya aqoonsiga wejiga qofka, magaca qofka iyo codka qofka intaba ama midkooda.
6. Dhammaan warbaahinta kala duwan waxa aan kula talinaynaa inay si fiiro-dheer isaga hubiyaan barnaamijyada maqalka iyo muuqaalka leh ee looga soo tebiyo dadka xiskoodu dhiman yahay.
Waxa aanu ka codsanaynaa dadka bartay qareennimada kuwa gudaha jooga iyo kuwa debedda joogaba inay u diyaargaroobaan sidii ay ugu tuburucilahaayeen aqoontooda haddii loo baahdo in dacwad lagu soo oogo cid ku geftay sharafta iyo xuquuqda qofnimo ee dadka xiskoodu dhiman yahay.
Magacyada qorayaasha iyo waxgaradka bayaankan soo saaray:
1. C/RAXMAAN YUUSUF DUCAALE (BOOBE)
2. RASHIID SH. CLAAHI (GADHWEYNE)
3. PROF. C/QADIR NUUR SALAAD
4. MAXAMED YUUSUF XAAJI C/RAXMAAN(KEYSE)
5. MAXAMED BAASHE XAAJI XASAN
6. SACIID CALI SHIRE
7. MAXAMED SH. XASAN
8. MAXAMED CALI CIBAAR
9. ISMAACIIL CISMAAN XUSEEN
10. IBRAAHIM FAARAX JOOJ
11. SACIID AXMED MAXAMUD NUUR
12. SAHRA MAXAMED MAXAMUUD
13. AAMINA MAXAMUUD WARSAME
Wixii faahfaahina kala xidhiidh:
C/raxmaan Yuusuf Ducaale (Boobe) [email protected]
Maxamed Yuusuf (Keyse) [email protected]
C/qadir Salaad [email protected]